Nkyerɛkyerɛ ne Apam
Mmerɛbuo Nhyehyɛeɛ ma Emunsɛm
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 1
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 2
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 3
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 4
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 5
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 6
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 7
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 8
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 9
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 10
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 11
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 12
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 13
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 14
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 15
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 16
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 17
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 18
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 19
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 20
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 21
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 22
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 23
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 24
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 25
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 26
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 27
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 28
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 29
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 30
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 31
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 32
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 33
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 34
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 35
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 36
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 37
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 38
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 39
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 40
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 41
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 42
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 43
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 44
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 45
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 46
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 47
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 48
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 49
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 50
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 51
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 52
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 53
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 54
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 55
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 56
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 57
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 58
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 59
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 60
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 61
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 62
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 63
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 64
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 65
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 66
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 67
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 68
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 69
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 70
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 71
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 72
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 73
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 74
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 75
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 76
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 77
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 78
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 79
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 80
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 81
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 82
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 83
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 84
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 85
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 86
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 87
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 88
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 89
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 90
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 91
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 92
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 93
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 94
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 95
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 96
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 97
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 98
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 99
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 100
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 101
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 102
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 103
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 104
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 105
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 106
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 107
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 108
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 109
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 110
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 111
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 112
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 113
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 114
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 115
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 116
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 117
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 118
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 119
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 120
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 121
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 122
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 123
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 124
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 125
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 126
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 127
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 128
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 129
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 130
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 131
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 132
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 133
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 134
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 135
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 136
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 137
Nkyerɛkyerɛ ne Apam 138
Asɔre no Dawurubɔ
Asɔre no Dawurubɔ 1
Asɔre no Dawurubɔ 2
Nkyerɛkyerɛ ne Apam no yɛ adiyisɛm kronkron ne nkannyan so mpaemuka a wɔaboaboa ano a wɔde maae sɛ wɔmfa nkyekyere Onyankopɔn ahemman no ne ɛmu nhyehyɛeɛ wɔ asase yi so nna a ɛtwa toɔ yi mu. Ɛwɔ mu sɛ wɔde afã no mu dodoɔ no ara ma asɔremma a wɔn wɔ Yesu Kristo Asɔre a ɛwɔ hɔ ma Nna a Ɛdi Akyire Ahoteɛfoɔ no mu deɛ, nanso ɛmu nkransɛm, kɔkɔbɔ, ne kasakyerɛ no so wɔ mfasoɔ ma adasamma nyina ara, na ɛto nsa frɛ nnipa biara a wɔn wɔ baabiara sɛ wɔntie Awurade Yesu Kristo nne a ɛrekasa kyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔbɛnya honam mu yiedie ne daapem nkwagyeɛ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so, wɔ Obobuo 1, 1831, wɔ Asɔre no mpaninfoɔ nhyiamu kɛseɛ soronko ase, a ɛbaa so wɔ Hiram, Ohio. Adiyisɛm bebree na wɔanya afiri Awurade hɔ ansa na saa berɛ yi rebɛduru, na sɛdeɛ wɔbɛboaboa yeinom ano atintim ayɛ no nwoma de ato dwa, yɛ nsɛm titire no mu baako a wɔsii so gyinaeɛ wɔ nhyiamu kɛseɛ no ase. Saa Ɔfã yi kabom gyina hɔ ma Awurade Nnianim ma gyedie nkyerɛkyerɛ, apam, ne mmaransɛm a ɔde maae wɔ saa asɛmpa berɛ yi mu.
Nyi-firi-mu-nsɛm a ɛfiri Joseph Smith abakɔsɛm mu a ɛkyerɛ ɔbɔfoɔ Moronae nsɛm a ɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith, berɛ a na ɔwɔ nkɔmhyɛni no papa fie wɔ Manchester, New York, wɔ Ɛbɔ da 21 anwummerɛ, 1823. Moronae na ɔtwa toɔ wɔ abakɔsɛm-atwerɛfoɔ santene tentene a wɔyɛɛ twerɛtohɔ yi a seesei ɛda wiase anim sɛ Mormon Nwoma No. (Fa toto Malaki 4:5–6; ɔfa 27:9; 110:13–16; ne 128:18 nso).
Adiyisɛm a wɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith, wɔ Harmony Pennsylvania, Kutawonsa 1828, a ɛfa kratafa 116 a ɛyɛ nsa-ano atwerɛ nkyerɛaseɛ a ɛyera firii Mormon Nwoma no fa a ɛdi kan, deɛ wɔfrɛɛ no “Lihae Nwoma” no ho. Nkɔmhyɛni no de amemenemfe maa saa nkratafa yi nhwɛsoɔ firii ne nsa kɔɔ Martin Harris deɛ mu, ɔno a ɔsomm sɛ ɔtwerɛfoɔ berɛ tiawa mu wɔ Mormon Nwoma no nkyerɛaseɛ mu. Wɔnam Urim ne Tumim no so na wɔde adiyisɛm yi maae. (1:21–23.) (Hwɛ ɔfa 10.)
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so de maa n’agya Joseph Smith Sr., wɔ Harmony, Pennsylvania, Ɔgyefuo 1829.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ɔbɛnem 1829, wɔ Martin Harris adesrɛ ho.
Adiyisɛm a wɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith ne Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Oforisuo 1829.Oliver Cowdery hyɛɛ ne dwumadie ase sɛ ɔtwerɛfoɔ wɔ Mormon Nwoma no nkyerɛaseɛ no mu, Oforisuo 7, 1829. Na wanya adiyie kronkron dada afa Nkɔmhyɛni no adansedie ho, nokorɛ a ɛyɛ fa mprɛte a wɔakurukyire Mormon Nwoma no twerɛtohɔ no wɔ so. Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade nam Urim ne Tumim no so na ɔnyaa saa mmuaeɛ yi.
Adiyisɛm a wɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith ne Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Oforisuo 1829, berɛ a wɔnam Urim ne Tumim no so bisaae sɛ Yohane, ɔdɔfopa suani no, ɔtenaa honam mu anaa ɔwuuiɛ. Adiyisɛm yi yɛ nkyerɛaseɛ fã soronko wɔ twerɛtohɔ a wɔyɛɛ no wɔ aboa nwoma so a Yohane yɛɛe na ɔno ankasa de sieeɛ no.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so maa Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Oforisuo 1829. Wɔ Mormon Nwoma no nkyerɛaseɛ dwumadie mu no, Oliver, ɔno a ɔkɔɔ so somm sɛ ɔtwerɛfoɔ no, a na ɔtwerɛ Nkɔmhyɛni no ɔkatwerɛ no, pɛɛ sɛ wɔdom no nkyerɛaseɛ akyɛdeɛ. Awurade gyee ne nkotosrɛ no so na ɔmaa saa adiyisɛm yi.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so maa Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Oforisuo 1829. Oliver nyaa afotuo sɛ ɔnya aboterɛ, na wɔhyɛɛ no sɛ ɔmma n’ani nsɔ sɛ, saa berɛ yi mu no, ɔbɛtwerɛ asekyerɛfoɔ no katwerɛ no, kyɛn sɛ ɔbɛkyerɛ aseɛ ahwɛ.
Adiyisɛm a wɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith, wɔ Harmony, Pennsylvania, wɔ bɛyɛ Oforisuo1829 mu, ɛwɔm sɛ ebia wɔnyaa ɛmu bi wɔ 1828 ahuhuroberɛ mu. Ɛhanom na Awurade yii Joseph asotire ɛfa nsakraeɛ a nnipa atirimuɔdenfoɔ ayɛ wɔ nsa-ano-atwerɛ krataa 116 a ɛfiri Lihae nwomankyerɛaseɛ no mu, wɔ Mormon Nwoma no mu. Na saa nsa-ano-atwerɛ krataa yi ayera afiri Martin Harris nneɛma mu, ɔno a wɔde nkrataa no hyɛɛ ne nsa berɛ tiawa mu. (Hwɛ atifiasɛm ma ɔfa 3.) Tirimpɔ bɔne no yɛɛ sɛ wɔbɛtwɛn ahwɛ nkyerɛaseɛ foforɔ a ɛbɛba no anim, fa nsɛm a ɛfa nkrataa a wɔawia no ho, na afei wɔagu nkyerɛaseɛni no anim ase akyerɛ nsonoeɛ a nsakraeɛ no de aba. Na saa atirimuɔden botae yi, ɔbɔnefoɔ no na ɔsusuu ho, na na Awurade nim, mpo berɛ a na Mormon, tete Nifaeni abakɔsɛmni no, retwitwa mprɛte a wɔaboa ano so nsɛm ntiantia no, na ɛdaa adi wɔ Mormon Nwoma no mu. (Hwɛ Mormon Nsɛm 1:3–7).
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so maa ne nuabarima Hyrum Smith, wɔ Harmony, Pennsylvania, Kɔtɔnimaa 1829. Saa adiyisɛm yi yɛ mmuaeɛ a ɔnyaae nam Urim ne Tumim no so wɔ Joseph nkotosrɛ ne n’adebisa ho. Joseph Smith abakɔsɛm no susu sɛ saa adiyisɛm yi ɔnyaae berɛ a wɔsan de Aaron Asɔfodie no baae akyi.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so de maa Joseph Knight Sr., wɔ Harmony, Pennsylvania, Kɔtɔnimaa 1829. Joseph Knight gyee Joseph Smith nsɛm a ɔde too dwa no diiɛ, deɛ ɛfa Mormon Nwoma mprɛte no a wanya wɔne hɔ no ne nkyerɛaseɛ adwuma a na ɛrekɔ so no, na mpɛn pii no na ɔma Joseph Smith ne ne twerɛtwerɛfoɔ no honam fã mu mmoa, a ɛboaa wɔn maa wɔtumi toaa nkyerɛaseɛ no so. Wɔ Joseph Knight adebisa ho, Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade na ɔnyaa adiyie yi.
Nyifirimu bi a efiri Joseph Smith abakɔsɛm mu a ɛreka Nkɔmhyɛni no ne Oliver Cowdery asɔfohyɛ wɔ Aaron Asɔfodie no mu wɔ bea a ɛbɛn Harmony, Pennsylvania, Kɔtɔnima 15, 1829. Asɔfohyɛ yi yɛ ɔbɔfoɔ a ɔdaa ne ho adi sɛ ɔne Yohane na ɔde ne nsa guu wɔn so hyɛɛ wɔn asɔfo, ɔno a wɔfrɛ no Yohane Suboni wɔ Apam Foforɔ no mu. Ɔbɔfoɔ no kyerɛɛ mu sɛ ɔredi dwuma no wɔ tete Asomafoɔ Petro, Yakobo ne Yohane akwankyerɛ ase, wɔn a na wɔkura asɔfodie kɛseɛ no nsafoa, a na wɔfrɛ no Mɛlkisɛdɛk Asɔfodie no. Na wɔahyɛ Joseph ne Oliver bɔ sɛ ne berɛ mu wɔde Mɛlkisɛdɛk Asɔfodie no bɛma wɔn. (Hwɛ Ɔfa 27:7, 8, 12.)
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so de maa David Whitmer, wɔ Fayette, New York, Ayɛwohomumɔ 1829. Na Whitmer abusua no ani abɛgye Mormon Nwoma no nkyerɛaseɛ no ho yie. Nkɔmhyɛni no kyekyeree n’atenaeɛ wɔ Peter Whitmer Sr. fie, baabi a ɔtenaae kɔsii sɛ ɔde nkyerɛaseɛ adwuma no kɔɔ awieɛ na ɔnyaa nwoma no a ɛrefiri aba no ho tumi a wɔde bɛhwɛ so. Whitmer mma mmarima baasa a, obiara anya adanseɛ afa adwuma no nokorɛyɛ ho no, maa asɛm no ho hiaa wɔn yie ɛfaa wɔn ankorɛankorɛ asɛdeɛ ho. Adiyisɛm yei ne mmienu a ɛtoa so no (ɔfa 15 ne 16) yɛ mmuaeɛ a wɔde maae wɔ deɛ wɔnam Urim ne Tumim no so bisaae no ho. David Whitmer akyire yi bɛyɛɛ Mormon Nwoma no Adansefoɔ Baasa no mu baako.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so maa John Whitmer, wɔ Fayette, New York, Ayɛwohomumɔ 1829 (hwɛ ɔfa 14 ti asɛm no.) Nkra no yɛ atirimsɛm ne awɔsee ma ɔno ankasa, ɛne sɛ Awurade ka deɛ John Whitmer ne Ɔno nko ara na wɔnim. John Whitmer akyire yi bɛyɛɛ Mormon Nwoma no Adansefoɔ Nwɔtwe no mu baako.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so de maa Peter Whitmer Jr., wɔ Fayette, New York, Ayɛwohomumɔ 1829 (hwɛ Ɔfa 14 ti asɛm no.) Peter Whitmer, Jr. akyire yi bɛyɛɛ Mormon Nwoma no Adansefoɔ Nwɔtwe no mu baako.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so de maa Oliver Cowdery, David Whitmer, ne Martin Harris, wɔ Fayette, New York, Ayɛwohomumɔ 1829, ansana wɔrebɛhwɛ mprɛte a nkurukyire no wɔ so na ɛkura Mormon Nwoma no twerɛtohɔ no. Na Joseph ne ne twerɛfoɔ, Oliver Cowdery, asua afiri Mormon Nwoma mprɛte nkyeraseɛ no so sɛ wɔbɛyi adansefoɔ soronko baasa (hwɛ Eter 5:2–4; 2 Nifae 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer, ne Martin Harris nyaa nkanyan bi wɔ wɔn mu ma wɔnyaa ɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ adansefoɔ baasa soronko no. Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade, na saa adiyisɛm yi ne mmuaeɛ a ɔnam Urim ne Tumim no so de maae.
Adiyisɛm a wɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith, Oliver Cowdery ne David Whitmer, wɔ Fayette, New York, Ayɛwohomumɔ 1829. Sɛdeɛ Nkɔmhyɛni no seɛ no, saa adiyisɛm yi kyerɛɛ “asomafoɔ dumienu no frɛ wɔ nna a ɛdi akyire yi mu, ɛne akwankyerɛ a ɛfa Asɔre no nkyekyereɛ ho.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so, wɔ Manchester, New York, wɔ bɛyɛ1829 ahuhuberɛ mu. Wɔ n’abakɔsɛm mu no, Nkɔmhyɛni no kyerɛ sɛ ɛyɛ “mmaransɛm a ɛfiri Onyankopɔn na ɛmfiri onipa hɔ a ɔde maa Martin Harris, Ɔno a Ɔnniawieɛ no na ɔde maae.”
Adiyisɛm a ɛfa Asɔre no nkyekyereɛ ne ne nhwɛsoɔ ho, a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so wɔ anaa bea a ɛbɛn Fayette, New York. Ebia wɔde saa adiyisɛm yi afa bi maa ntɛm bɛyɛ 1829 ahuhuberɛ mu. Adiyisɛm mua no a wɔfrɛ no Ntwerɛeɛ ne Apam no, ɛrekame ayɛ sɛ wɔtwerɛɛ no Oforisuo 6, 1830 (da a wɔkyekyeree Asɔre no) akyi pɛɛ. Nkɔmhyɛni no twerɛeɛ sɛ, “Yɛnam nkɔmhyɛ honhom ne adiyisɛm so nyaa deɛ ɛtoa so yi firii Ne hɔ (Yesu Kristo); a amma yɛn nkrasɛm pii nko ara, na ɛsan so kyerɛɛ yɛn da korɔ a, sɛdeɛ ne pɛ ne ne mmarasɛm teɛ no, yɛbɛkɔ so akyekyere n’Asɔre bio asase yi so.”
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Fayette, New York, Oforisuo, 6, 1830.Wɔde saa adiyisɛm yi maae berɛ a wɔhyehyɛɛ Asɔre no, wɔ da a wɔaka ho asɛm no mu, wɔ Peter Whitmer Sr., no fie. Mmarima baasia a wɔabɔ wɔn asu dada no ka ho bi. Saa nnipa yinom ano kɔɔ bɛnkorɔ mu, wɔ abatoɔ mu, na wɔkyerɛɛ wɔn pɛ ne wɔn tirimpɔ sɛ wɔbɛhyehyɛ asɔre no, sɛdeɛ Onyankopɔn mmarasɛm teɛ no (hwɛ ɔfa 20). Wɔsan nso too aba sɛ wɔgye to mu bi na wɔbɛsɔ Joseph Smith, Jr. ne Oliver Cowdery mu sɛ ahwɛsofoɔ titenafoɔ Asɔre no mu. Joseph nam nsa a wɔde gu soɔ so hyɛɛ Oliver Asɔre panin, na Oliver nso hyɛɛ Joseph saa ara bi. Wɔhyiraa adidi kronkron no so de ma wieɛ no, Joseph ne Oliver de nsa guu wɔn a wɔka ho bi so mmaako mmaako, ama wɔanya Sunsum Kronkron no na wɔahyɛ obiara den sɛ Asɔreba.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so, wɔ Manchester, New York, Oforisuo 6, 1830. Saa adisyisɛm yi wɔde maa Asɔre no esiane wɔn a na wɔabɔ wɔn asu dada a wɔpɛ sɛ wɔbɛdɔm Asɔre no, na wɔmmpɛ sɛ wɔbɔ wɔn asu bio.
Adiyisɛm nnidisoɔ nnum a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so, wɔ Manchester, New York, Oforisuo 1830, maa Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith Sr.: ne Joseph Knight Sr. Ɛnam nnipa baanum a wɔabɔ wɔn din no pɛ kɛseɛ a wɔnyaae sɛ wɔbɛhunu wɔn asɛdeɛ nti, Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade na ɔnyaa adiyisɛm maa nnipa no mu biara.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no ne Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Kutawonsa 1830. Ɛwom sɛ na ɛnnii abosome nan firi berɛ a wɔkyekyeree asɔre no deɛ, nanso, na ɔtaaeɛ mu abɛyɛ den, ɛnti na ɛsɛ sɛ kannifoɔ no kɔbɔ wɔn ho adwaa kakra. Wɔde adiyisɛm mmiɛnsa a ɛdidi soɔ yi maae saa berɛ yi, sɛ ɛbɛhyɛ wɔn den, ahyɛ wɔn nkuran, na akyerɛkyerɛ wɔn.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so, wɔ Pennsylvania, Kutawonsa 1830 (hwɛ atifi asɛm ma ɔfa 24). Saa adiyisɛm yi da Awurade pɛ adi kyerɛ Emma Smith, Nkɔmhyɛni no yere no.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no, Oliver Cowdery, ne John Whitmer, wɔ Harmony, Pennsylvania, Kutawonsa 1830 (hwɛ ɔfa 24 ti).
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni, wɔ Harmony, Ɔsanaa 1830. Ɔreyɛ ahoboaboa ama Nyamesurofoɔ som a anka wɔbɛhyira panoo ne nsã no so de ama no, Joseph siim sɛ ɔrekɔtɔ nsã. Ɔsoro somafoɔ bɛhyiaa no na ɔnyaa saa adiyisɛm yi, a wɔatwerɛɛ no fã bi wɔ saa berɛ no mu, na deɛ aka no wɔtwerɛɛeɛ wɔ Ɛbɔ a ɛdi soɔ no. Seesei wɔde nsuo na ɛyɛ asɔre adidi kronkron som no.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so maa Oliver Cowdery, wɔ Fayette, New York, Ɛbɔ 1830. Na Hiram Page, Asɔreba bi, wɔ ɔboɔ bi a na ɔka sɛ ɛboa no ma ɔnya adiyisɛm a ɛfa Sion nkyekyereeɛ ne Asɔre no nhyehyɛeɛ ho. Na saa nsɛm yi adaadaa asɔremma bebree, mpo ɛnyaa Oliver Cowdery so nkɛntɛnsoɔ bɔne. Ansa na wɔrebɛyɛ nhyiamu bi a wɔahyehyɛ no ara pɛ na Nkɔmhyɛni no de mmɔdemmɔ bisaa Awurade ɛfaa asɛm no ho, na saa adiyisɛm yi baae.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so, wɔ mpaninfoɔ nsia anim, wɔ Fayette, New York, Ɛbɔ 1830.Wɔde saa adiyisɛm yi maae nna kakra bi ansa na wɔrebɛyɛ nhyiamu no, a ɛhyɛ aseɛ Ɛbɔ 26 1830.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so maa David Whitmer, Peter Whitmer Jr., ne John Whitmer, wɔ Fayette, New York, Ɛbɔ 1830, a ɛdi nna mmiɛnsa ntam nhyiamu wɔ Fayette so no, ansa na Asɔre mpaninfoɔ no redi mpaepaemu no. Wɔdii kan tintimm saa nwoma yi sɛ adiyisɛm mmiɛnsa; Nkɔmhyɛni no ka bɔɔ mu yɛɛ no ɔfa baako wɔ Nkyerɛkyerɛ ne Apam nwoma a wɔtintimm wɔ 1835 no mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so de maa Thomas B. Marsh, Ɛbɔ 1830. Wɔwiee asɔre no nhyiamu ara na saa adiyisɛm yi baae (hwɛ ɔfa 30 atifiasɛm). Na wɔabɔ Thomas B. Marsh asu dada wɔ bosome no mu, na na wɔahyɛ no panin dada wɔ asɔre no mu ansa na wɔde adiyisɛm yi rema.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Jospeh Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Parley P. Pratt ne Ziba Peterson, wɔ Manchester, New York Ahinime ahyɛaseɛ 1830. Asɔre mpaninfoɔ no tee anigyeɛ kɛseɛ ne ɔpɛ nka ɛfa Lamanfoɔ no ho, wɔn a Asɔre no ahunu wɔn bɔhyɛ nhyira wɔ Mormon Nwoma no mu no. Ne saa nti, wɔsu frɛɛ Awurade sɛ ɔnkyerɛ Ne pɛ mfa sɛ wɔbɛsoma mpaninfoɔ, saa berɛ no, akɔ India abusuakuo no a ɛwɔ Atɔeɛ no. Adiyisɛm no dii so.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Ezra Thayre ne Northrop Sweet, wɔ Fayette, New York, Ahinime 1830. Ɔreda saa adiyisɛm yi nnianim adi no, Joseph Smith abakɔsɛm si so dua sɛ “Awurade … ayɛ krado daa sɛ ɔbɛkyerɛ wɔn a wɔde nsiyɛ hwehwɛ wɔ gyidie mu no adeɛ.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Orson Pratt, wɔ Fayette, New York, Obubuo 4, 1830. Na onuabarima Pratt anya mfeɛ dunkron saa berɛ no. Na wɔasakyera ma wɔabɔ no asu dapɛn nsia ansa na ɔrebɛte sɛ ne nua panin, Parley P. Pratt reka asɛmpa a wɔasan de aba no ho asɛm. Wɔnyaa saa adiyisɛm yi wɔ Peter Whitmer Sr., fie.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Fayette, New York, anaa wɔ bea bi a ɛbɛn hɔ, Ɔpɛnimma 7, 1830.Saa berɛ yi, na Nkɔmhyɛni no de ne ho ahyɛTwerɛ Kronkron no nkyerɛaseɛ dwuma no mu, a ɛrekame ayɛ sɛ ɔyɛ no dabiara. Wɔhyɛɛ nkyerɛaseɛ dwuma no ase firii Ayɛwohomumɔ 1830, na na Oliver Cowdery ne John Whitmer asom sɛ atwerɛtwerɛfoɔ. Esiane sɛ na wɔafrɛ wɔn seesei sɛ wɔnni dwuma foforɔ bi nti, wɔnam ɔsoro yie so frɛɛ Sidney Rigdon sɛ ɔnsom sɛ Nkɔmhyɛni no twerɛfoɔ wɔ saa adwuma yi mu (hwɛ nkyekyɛmu a ɛtɔ so 20). Wɔ saa adiyisɛm yi nnianim mu no, Joseph Smith abakɔsɛm no kyerɛ sɛ: “Ɔpɛnimaa bosome mu no, Sidney Rigdon [firi Ohio] baaeɛ bɛbisaa Awurade hɔ asɛm, na ɔne Edward Partridge na ɛbaae … Saa anuanom yinom bɛduruui berɛ kakraa bi akyi no, sei na Awurade kaaeɛ.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Edward Partridge, wɔ bea a ɛbɛn Fayette, New York, Ɔpɛnimma 9, 1830. (Hwɛ Ɔfa 35 atifiasɛm.) Joseph Smith abakɔsɛm ka sɛ Edward Partridge “yɛ nyamesuro ho nhwɛso pa, ne Awurade aberempɔn no mu baako.”
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ bea a ɛbɛn Fayette, New York, Ɔpɛnimma 1830. Ɛhanom na wɔde mmarasɛm a ɛdi kan a ɛfa asɔremma anoboaboa wɔ saa asɛmpa berɛ yi mu maaeɛ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Fayette, New York, Ɔpɛpɔn 1831. Na saa berɛ no yɛ Asɔre no nhyiamu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so maa James Covel, wɔ Fayette, New York, Ɔpɛpɔn 5 1831. James Covel, a na ɔyɛ Methodist sɔfoɔ no bɛyɛ mfeɛ aduanan no, ne Awurade yɛɛ apam sɛ ɔbɛdi mmara biara a Awurade de bɛma no nam Joseph Nkɔmhyɛni no so.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Fayette, New York, Ɔpɛpɔn 6, 1831. Ansa na wɔrebɛtwerɛ saa adiyisɛm yi no, Nkɔmhyɛni no abakɔsɛm ka sɛ, “Ɛnam sɛ James Covel poo Awurade asɛm, na ɔsan kɔfaa ne nyinasosɛm dada no nti, Awurade maa me ne Sidney Rigdon adiyisɛm a ɛtoa soɔ yi” (hwɛ ɔfã 39).”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Asɔre no, wɔ Kirtland, Ohio, Ogyefuo 4 1831. Saa adiyisɛm yi kyerɛ Nkɔmhyɛni no ne Asɔre mpanimfoɔ sɛ wɔmmɔ mpaeɛ mfa nnya Onyankopɔn “mmara” (hwɛ ɔfã 42). Na Joseph Smith firii New York bɛduruu Kirtland nkyɛreeɛ, na Leman Copley, a ɔyɛ asɔreba wɔ Thompson, Ohio, a ɛbɛn no, “asrɛ Onua Joseph ne Sidney [Rigdon] … sɛ wɔne no ntena na ɔbɛma wɔn afie ne aduane.” Adiyisɛm a ɛdi soɔ yi ma nkyerɛmu fann fa baabi a ɛwɔ sɛ Joseph ne Sidney tena na ɛsan nso frɛ Edward Patridge sɛ ɔnyɛ Asɔre no hwɛfoɔ a ɔdi kan.
Adiyisɛm a wɔde maae, afa-afa mmienu, nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ogyefuo 9 ne 23, 1831. Deɛ ɛdi kan a ɛyɛ nkyekyɛmu 1 kɔsi 72 awieɛ no, wɔnyaae wɔ mpaninfoɔ dumienu no anim, de hyɛɛ Awurade bɔhyɛ a wahyɛ dada no ma sɛ wɔde “mmara” no bɛma wɔ Ohio (hwɛ ɔfa 38:32). Nkyɛmu a ɛtɔ so mmienu no yɛ 73 kɔsi 93 awieɛ. Nkɔmhyɛni no kyerɛɛ mu sɛ saa adiyisɛm yi “kura Asɔre no mmara no.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ogyefuo bosome mu, 1831. Saa berɛ yi, na asɔremma binom wɔ haw fa nkorɔfoɔ atorɔ nsɛmkaeɛ sɛ wɔyɛ adiyifoɔ ho. Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade na ɔnyaa saa nkitahodie yi a ɔkaa ho asɛm kyerɛɛ Asɔre mpaninfoɔ no. Ɔfã a ɛdi kan no fa Asɔre no nhyehyɛeɛ ho; deɛ ɛtɔ so no yɛ kɔkɔbɔ a ɛsɛ sɛ mpaninfoɔ no de ma asase so aman no.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Kirtland, Ohio, wɔ Ɔgyefuo awieɛ mu, 1831. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛdi nhyehyɛeɛ a wɔada no adi wɔ honam mu no, Asɔre no frɛɛ nhyiamu a na ɛbɛba so Ayɛwohomumɔ bosome a ɛdi so no mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Asɔre no wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 7, 1831. Ɔretwerɛ saa adiyisɛm yi nnianim no, Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ “saa berɛ yi wɔ Asɔre no mu no…wɔbɔɔ atorɔ amaneɛbɔ pii … ne nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ ho dawuro, … sɛdeɛ wɔbɛsi nkorɔfoɔ a wɔrehwehwɛ adwuma no mu, anaa wɔresɔ gyedie no mu no kwan. Nanso deɛ ɛyɛɛ Ahoteɛfoɔ no anigyeɛ ne sɛ, … menyaa deɛ ɛtoa soɔ yi”.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Asɔre no, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 8 1831. Asɔre no ahyɛaseɛ berɛ no, na wɔnnya nnyaa nkabom nhwɛsodeɛ a wɔde kyerɛ kwan wɔ Asɔre som no mu. Nanso, na wɔayɛ amanneɛ bi ato hɔ sɛ asɔremma ne wɔn a wɔasi nkete sɛ wɔbɛhwehwɛ asɔre no mu nko ara na wɔgye wɔn wɔ Asɔre no adidi kronkron nhyiamu ne nhyiamu afoforɔ ase. Saa adiyisɛm yi kyerɛ Awurade pɛ fa kwan a wɔmfa nhwɛ nhyiamu so ne kwan a wɔmfa na wɔnni ho dwuma ne N’akwankyerɛ a ɛfa sɛdeɛ yɛbɛhwehwɛ na yɛbɛhunu Honhom akyɛdeɛ no.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 8, 1831. Ahyɛaseɛ no na John Whitmer, a na wadi kan asom sɛ Nkɔmhyɛni no twerɛtwerɛfoɔ no, twentwɛnn ne nan ase berɛ a wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnsom sɛ Asɔre no abakɔsɛm twerɛfoɔ ne twerɛtohɔfoɔ na ɔnhyɛ Oliver Cowdery ananmu. Ɔtwerɛɛe sɛ, “Na mempɛ sɛ meyɛ nanso mehunuu sɛ ɛwɔ sɛ Awurade pɛ yɛ hɔ, na sɛ ɔpɛ a, mɛpɛ sɛ ɔbɛfa Joseph Ɔdehununi no so ada no adi.” Joseph nyaa saa adiyisɛm yi akyi no, John Whitmer gye too mu na ɔsomm wɔ diberɛ a wɔayi ama no mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 10, 1831.Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade kwan a wɔmfa so ntɔ nsase mma Ahoteɛfoɔ no anoboaboa. Na yei yɛ asɛm titire, esiane sɛ na Asɔremma no retu afiri Amerika apueɛ fã mu, sɛdeɛ mmara a Awurade hyɛɛe sɛ wɔmmoaboa wɔn ho wɔ Ohio teɛ no (hwɛ Afã 37:1–3; 45:64).
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, de maa Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, ne Leman Copley, wɔ Kirtland, Ohio, Kɔtɔnimma 7, 1831. Nã Leman abam asɛmpa no, nanso na ɔdaso gye n’asɔre dada Shakers (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing) nkyerɛkyerɛ bi di. Shakerfoɔ gyidie no bi ne sɛ Kristo Mmaeɛ a ɛtɔ so Mmienu no anya aba dada, na Ɔbaae wɔ ɔbaa Ann Lee nsɛsoɔ. Na wɔn nnsusu sɛ nsuo mu asubɔ ho hia. Na wɔpo awareɛ na na wɔn wɔ gyedie wɔ sugyadie asetena korakora mu. Na Shakerfoɔ no bi bara mogyanam weɛ. Ɔretwerɛ saa adiyisɛm yi nnianim no, Joseph Smith abakɔsɛm ka sɛ, “Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛnya nteaseɛ a ɛdi mũ yie ɛfa asɛm yi ho no, mebisaa Awurade, na menyaa deɛ ɛtoa so yi”. Adiyisɛm no kyerɛɛ Shaker kuo no nhyɛaseɛ adwene no bi sɛ ɛnyɛ. Anuanom a wɔaka wɔn ho asɛm dada no de adiyisɛm a wɔatwerɛ no bi kɔkyerɛɛ Shaker asafo no (a na wɔbɛn Cleveland, Ohio), na wɔkekan ne nyina ara kyerɛɛ wɔn, nanso wɔpooe.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Kɔtɔnimma 1831. Joseph Smith abakɔsɛm ka sɛ na mpaninfoɔ no binom nnte ahonhom ahodoɔ a wɔada wɔn ho adie baabiara no ase, na wɔmaa saa adiyisɛm yi sɛ mmuaeɛ maa n’asɛmmisa soronko a ɛfa asɛm yi ho. Na deɛ wɔfrɛ no honhom mu nneyɛɛe no nnyɛ adeɛ a ɛho yɛ na wɔ asɔremma no ntam, a na ebinom ka sɛ wɔnya anisoadehunu ne adiyisɛm.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith, Nkɔmhyɛni no so, wɔ Thompson, Ohio, Kɔtɔnimma 1831. Saa berɛ yi, Ahoteɛfoɔ no a na wɔatu afiri apueɛ aman mu no ahyɛaseɛ reduru Ohio, na ɛho bɛhiaae sɛ wɔbɛyɛ nhyehyɛeɛ pɔtee a ɛfa wɔn atenaeɛ ho. Ɛnam sɛ saa asɛdeɛ yi yɛ ɔhwɛfoɔ dwumadibea nti, Ɔhwɛfoɔ Edward Partridge bisaa deɛ ɔnyɛ wɔ asɛm yi ho, na Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Asɔre no mpaninfoɔ no, wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 6, 1831. Nã wɔayɛ nhyiamu wɔ Kirtland, a wɔhyɛɛ aseɛ Ayɛwohomumɔ da a ɛtɔ so mmiɛnsa na wɔwiee da a ɛtɔ so nsia. Saa nhyiamu yi ase na wɔyɛɛ asɔfohyɛ a ɛda nso a ɛdi kan wɔ sɔfo panin dibea mu, na wɔhunuu ahonhom atorɔfoɔ ne nnaadaafoɔ adiyie na wɔkaa wɔn anim.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Algernon Sidney Gilbert, wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 8, 1831. Ɛsiane Sidney Gilbert adesrɛ nti, Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade faa Ɔnua Gilbert adwuma ne ne frɛ ho wɔ Asɔre no mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Newel Knight, wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 10, 1831. Asɔre asafomma a na wɔte Thompson, Ohio, no mu kyɛɛe wɔ nsɛmmisa a ɛfa agyapadeɛ a wɔde bɔ afɔreɛ ho. Pɛsɛmenkomenya ne adefudepɛ daa wɔn ho adi. Ɛtoa ne soma so kɔɔ Shakerfoɔ no hɔ no (hwɛ atifiasɛm ma ɔfa 49), Leman Copley buu n’apam so sɛ ɔde n’afuo kɛseɛ no bɛbɔ afɔreɛ sɛ apɛgyadeɛbea ama Ahoteɛfoɔ a na wɔreba firi Colesville, New York no. Ne saa nti, na Newel Knight (asɔremma a wɔn wɔ Thompson no kannifoɔ) ne mpaninfoɔ foforɔ aba Nkɔmhyɛni no hɔ rebisa deɛ wɔnyɛ. Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade na ɔnyaa saa adiyisɛm yi, a ɛhyɛ asɔremma a wɔn wɔ Thompson sɛ wɔmfiri Leman Copley afuo no mu na wɔntu kwan nkɔ Missouri.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa William W. Phelps, wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 14, 1831. Nã William W. Phelps, a na ɔyɛ nwoma tintimfoɔ, ne n’abusua abɛduru Kirtland berɛ tiawa bi mu, na Nkɔmhyɛni no hwehwɛɛ Awurade hɔ adwene ɛfa ne ho.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 15, 1831. Saa adiyisɛm yi ka Ezra Thayre anim ɛnam sɛ wannyɛ setie amma kane adiyisɛm bi (“mmarasɛm” a wɔkaa ho asɛm nkyekyɛmu 8 no), a Joseph Smith nyaae maa no, a ɛma Thayre akwankyerɛ fa n’asɛdeɛ wɔ Frederick G. Williams afuo, faako a na ɔte, no ho. Adiyisɛm a ɛdi soɔ yi san nso twe Thayre frɛ sɛ ɔne Thomas B. Marsh nkɔ Missouri no nso san (hwɛ ɔfã 52:22).
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Sion, Jackson County, Missouri, Kitawonsa 20, 1831. Sɛdeɛ wɔbɛyɛ setie ama Awurade mmara sɛ wɔntu kwan nkɔ Missouri, faako a Ɔbɛda ‘mo apɛgyadeɛ asase’ adi nti (hwɛ ɔfã 52), mpaninfoɔ no tuu kwan firii Ohio kɔɔ Missouri atɔeɛ hyeɛ so. Joseph Smith dwenee Lamanfoɔ no tebea no ho na ɔbisaa ne ho sɛ: “Dabɛn na ɛserɛ bɛhane sɛ nhwiren? Dabɛn na wɔbɛsi Sion wɔ n’animuonyam mu, na ɛhefa na Wo tɛmpol bɛgyina, deɛ amanaman nyina ara bɛba mu wɔ nna a ɛtwa toɔ no?”. Ɛno akyi na ɔnyaa saa adiyisɛm yi.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so, wɔ Sion, Jackson County, Missouri, Ɔsannaa 1, 1831. Wɔ Homeda a ɛdi kan no a Nkɔmhyɛni no ne n’asafo bɛduruu Jackson County, Missouri akyire yi no, wɔyɛɛ nyamefɛrefoɔ som na wɔnam asubɔ so gyee asafomma baanu. Saa nnawɔtwe no mu no, asɔremma binom a wɔyɛ Colesville ahoteɛfoɔ a wɔfiri Thompson Nkorabata no mu ne afoforɔ bɛduruuiɛ (Hwɛ ɔfa 54). Dodoɔ no ara ho peree wɔn sɛ wɔbɛsua Awurade pɛ fa wɔn ho wɔ bea foforɔ a wɔreboa wɔn ano no.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Sion, Jackson County, Missouri, Ɔsannaa 7, 1831. Ɛdi saa adiyisɛm yi anim no, wɔdwiraa asase no ho, sɛdeɛ na Awurade akyerɛ no, na bea a wɔbɛsi tɛmpol no nso wɔyi sii hɔ. Da a wɔnyaa saa adiyisɛm yi, Polly Knight, Joseph Knight Sr. yere, wuui, ɔno ne Asɔreba a ɔdi kan wuui wɔ Sion. Kane asɔremma no kyerɛɛ saa adiyisɛm yi mu sɛ “ɛkyerɛɛ Ahoteɛfoɔ no sɛdeɛ wɔkora homeda no ne sɛdeɛ wɔkyene kɔm bɔ mpaeɛ.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Independence, Jackson County, Missouri, Ɔsannaa, 8 1831. Saa berɛ yi, na mpaninfoɔ a wɔtuu kwan kɔɔ Jackson County a wɔde wɔn ho hyɛɛ asase no ne tɛmpol bea nteho mu no pɛɛ sɛ wɔbɛhunu deɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Nkɔmhyɛni Joseph Smith so, wɔ Missouri Asubɔntene ano, McIlwaine’s Bend, Ɔsannaa, 12 1831. Wɔsan kɔɔ Kirtland bio no, na Nkɔmhyɛni no ne mpaninfoɔ du atwa kwan asiane Missouri Asubɔntene no wɔ kodoɔ mu. Da a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ akwantuo mu no, wɔhyiaa asiane bebree. Ɔpanin William W. Phelps, hunuu ɔsɛefoɔ no, wɔ anisoadehunu mu, awia ketee, sɛ ɔnam nsuo no ani so wɔ tumi mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so wɔ Missouri Asubɔntene no nsunoa wɔ Chariton, Missouri, Ɔsannaa, 13 1831. Saa da yi Nkɔmhyɛni no ne ne kuo, a na wɔnam kwan so firi Independence rekɔ Kirtland no, hyiaa mpaninfoɔ bebree a na wɔnam kwan so rekɔ Sion asase no so, na, anigyeɛ nkyea akyire no, wɔnyaa saa adiyisɛm yi.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, wɔ Ɔsannaa 30, 1831. Na Nkɔmhyɛni no, Sidney Rigdon, ne Oliver Cowdery afiri wɔn nsrahwɛ wɔ Missouri abɛduru Kirtland Ɔsannaa, 27. Joseph Smith abakɔsɛm kasa fa saa adiyisɛm yi ho sɛ, “Wɔ Asɔre no mmɔfrase nna mu no, na asɔremma no wɔ ahopereɛ kɛseɛ sɛ wɔbɛnya Awurade asɛm wɔ biribiara a ɛfa wɔn nkwagyeɛ ho; na esiane sɛ na Sion asase no yɛ honam fam adeɛ a seesei ɛho hia kɛse a wɔredwene ho no nti, mebisaa ahoteɛfoɔ no anoboaboa ho asɛm bi kaa ho firii Awurade hɔ, ne deɛ ɛfa asase no tɔ, ne nsɛm foforɔ ho.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Asɔre mpaninfoɔ no, wɔ Kirtland, Ohio, Ɛbɔ 11, 1831. Na Nkɔmhyɛni no reboaboa ne ho akɔ Hiram Ohio, akɔhyɛ Twerɛ Kronkron nkyerɛase no ase, a na wɔde ato nkyɛn berɛ a na ɔwɔ Missouri no. Anuanom asafo bi a na wɔahyɛ wɔn sɛ wɔn ntu kwan nkɔ Sion (Missouri) no de nsiyɛ gu so reyɛ ahoboa sɛ wɔbɛkɔ Ahinime mu. Saa berɛ yi a na adaagyeɛ nni hɔ no, na wɔnyaa adiyisɛm yi.
Adiyisɛm a ɛfa mpaebɔ ho a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Ahinime 30, 1831.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Ahinime 29, 1831. Na William E. McLellin asrɛ Awurade wɔ kokoam sɛ ɔmfa Nkɔmhyɛni no so mmua nsɛmmisa nnum a Joseph Smith nim no ano. McLellin adesrɛ nti, Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade na ɔnyaa saa adiyisɛm yi.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Obubuo ahyɛaseɛ, 1831. Na saa berɛ yi yɛ nhyiamu soronko bi, wɔsusuui, dii ho dwuma sɛ wɔtintim adiyi -nsɛm a wɔanya dada afiri Awurade hɔ nam Nkɔmhyɛni no so (hwɛ ti asɛm ma ɔfã 1). Na ɛnkyɛreeɛ a William W. Phelps asi Asɔre nwoma-tintimbea wɔ Independence, Missouri. Nhyiamu no sii gyinaeɛ sɛ wɔde adiyisɛm a ɛwɔ Book of Commandments (Mmaransɛm Nwoma) no mu bɛba dwa so na wɔatintim ahodoɔ 10, 000 (a ɛnam ɔhaw a na wɔn ani nna so nti wɔtintim ahodoɔ 3,000). Anuanom no pii dii adanseɛ kronkron sɛ adiyisɛm a wɔaboaboa ano saa berɛ no yɛ nokorɛ ampa, sɛdeɛ Sunsum Kronkron a wɔahwie agu wɔn so no adanseɛ teɛ. Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ berɛ a wɔnyaa adiyisɛm a ɛyɛ ɔfã baako no, asɔremma no dii nkɔmmɔ faa kasa a wɔde twerɛɛ adiyisɛm no. Saa adiyisɛm yi baae.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Obubuo 1, 1831, wɔ mmuaeɛ ma mpaebɔ sɛ Awurade nna n’adwene adi mfa Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, ne William E. McLellin ho. Ɛwɔ mu sɛ wɔde saa adiyisɛm yi fa bi maa mmarima nnan yi deɛ, nanso emu nsɛm no fa pii fa Asɔre no nyina ara ho. Wɔ Joseph Smith akwankyerɛ so no, wɔtrɛɛ saa adiyisɛm yi mu berɛ a wɔde baa dwa so wɔ 1835 Nkyerɛkyerɛ ne Apam no mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Obubuo 11, 1831. Na wɔagye adiyisɛm a wɔaboaboa ano sɛ wɔrekɔtintim ntɛm so no ato mu wɔ nhyiamu soronko a wɔyɛɛ wɔ Obubuo 1–2 no ase. Wɔ Obubuo 3 mu no, wɔde saa adiyisɛm yi a wɔfrɛ no ɔfã 133 wɔ ha yi kaa ho na wɔfrɛɛ no Mmatahõ. Na wɔadi kan ayi Oliver Cowdery dada sɛ ɔmfa adiyisɛm ne mmaransɛm ntwerɛeɛ a wɔaboaboa ano no nkɔ Independence, Missouri, nkɔtintim. Na ɛsɛ sɛ ɔde sika a wɔayiyi toɔ sɛ wɔmfa nsi Asɔre a na ɛwɔ Missouri no kɔ. Saa adiyisɛm yi kyerɛ John Whitmer sɛ ɔne Oliver Cowdery nkɔ na ɛsan nso kyerɛ Whitmer sɛ ɔntu kwan na ɔmmoaboa abakɔsɛm nwoma ano wɔ ne frɛ mu sɛ Asɔre abakɔsɛm twerɛfoɔ ne twerɛtohɔfoɔ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Obubuo 12, 1831. Nkɔmhyɛni no abakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔyɛɛ nhyiamu soronko ahoroɔ nan firi Obubuo da a ɛdi kan kɔsi da a ɛtɔ so dumienu. Wɔ nhyiamu a ɛtwa toɔ no mu no wɔdwennwenee adiyisɛm a akyire yi wɔde bɛba dwa so sɛ Book of Commandments (Mmaransɛm Nwoma) no ho hia a ɛhia, na afei sɛ Nkyerɛkyerɛ ne Apam no. Wɔde saa adiyisɛm yi maae akyire yi a nhyiamu no agye ato mu sɛ “Asase so nyina ara ahonyadeɛ no, deɛ ɛsomboɔ ma Asɔre no” yɛ adiyisɛm no. Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ adiyisɛm yi yɛ “Asɔre no fapem wɔ nna a ɛtwa toɔ yi mu, ne mfasoɔ de ma wiase, rekyerɛ sɛ wɔde yɛn Agyenkwa ahemman no ahintasɛm nsafoa no ahyɛ onipa nsa bio”.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Hiram, Ohio, Ɔpɛnimma 1, 1831. Na Nkɔmhyɛni no akɔ so akyerɛ Twerɛ Kronkron no ase, ɔne Sidney Rigdon a na ɔyɛ ne twerɛfoɔ, kɔsi sɛ wɔnyaa saa adiyisɛm yi, na wɔde too nkyɛn kakra saa berɛ yi, ama wɔatumi adi nkyerɛkyerɛ a wɔde maae wɔ ha yi so. Na ɛwɔ sɛ anuanom no kɔka asɛmpa no ama wɔatumi abrɛ ɔtan a nnipa binom anya afa asɔre no ho no ase, esiane nkrataa a na ɔwaefoɔ Ezra Booth atwerɛ wɔ dawurubɔ nkrataa bi mu no.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔpɛnimma 4, 1831. Na mpaninfoɔ ne asɔremma bebree ahyia rebɛsua wɔn dwuma na wɔanya nkɔsoɔ bi aka ho wɔ Asɔre no nkyerɛkyerɛ mu. Saa ɔfa yi yɛ adiyisɛm mmiɛnsa mmoano a wɔnyaa no da korɔ. Nkyekyɛmu 1 kɔsi 8 da Newel K. Whitney frɛ sɛ ɔhwɛfoɔ adi. Wɔfrɛɛ no na wɔhyɛɛ no sɔfoɔ, na akyire yi wɔnyaa nkyekyɛmu 9 kɔsi 23, a ɛkyerɛkyerɛ ɔhwɛfoɔ asɛdeɛ mu. Ɛno akyire no, wɔde nkyekyɛmu 24 kɔsi 26 maae, a ɛma akwankyerɛ fa Sion anoboaboa ho.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Hiram, Ohio, Ɔpɛpɔn 10, 1832. Ɛfiri Ɔpɛnimma a abɛsen kɔ noahyɛaseɛ no, na Nkɔmhyɛni no ne Sidney de wɔn ho ahyɛ nsɛmpaka mu, na wɔbɔɔ mmɔden nam yei so brɛɛ anitan a asɔre atia Asɔre no ase (hwɛ ɔfã 71 atifiasɛm).
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Wayne County, New York, wɔ 1830. Mpo ansa na wɔrekyekyere Asɔre no, nsɛmmisa sɔreeɛ ɛfa kwan pa a wɔde bɔ asu ho, na ɛmaa Nkɔmhyɛni no pɛɛ mmuaeɛ faa asɛm no ho. Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ saa adiyisɛm yi yɛ nkyerɛmu de ma 1 Korintofoɔ 7:14, twerɛsɛm a na wɔtaa de foa mmɔfra asubɔ so.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Amherst, Ohio, Ɔpɛpɔn 25, 1832. Saa ɔfã yi adiyisɛm yɛ ahodoɔ mmienu (deɛ adi kan no yɛ nkyekyɛmu 1 de kɔsi 22 awieɛ na deɛ ɛtɔ so mmienu no yɛ nkyekyɛmu 23 de kɔsi 36 awieɛ) a wɔde maae da korɔ no ara.” Na saa berɛ yi yɛ nhyiamu, na ɛhɔ na wɔgyee Joseph Smith too mu na wɔhyɛɛ no sɛ Asɔfodie Kɛseɛ no Titenani. Mpaninfoɔ binom pɛɛ sɛ wɔbɛhunu wɔn mprempren asɛdeɛ mu. Saa adiyisɛm yi baae.
Anisoadehunu a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Hiram, Ohio, Ogyefuo 16, 1832. Ɔretwerɛ saa anisoadehunu yi nnianim no, Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ: “Mefirii Amherst nhyiamu ase baae no metoaa Twerɛsɛm no nkyerɛaseɛ no so. Adiyisɛm bebree a na yɛanya no maa no daa adi pefee sɛ wɔayi nsɛm a ɛho hia pii a ɛfa nipa nkwagyeɛ ho afiri Twerɛ Kronkron no mu, anaa ɛyeraae ansa na wɔrekeka abɔ mu. Nokorɛ a ɛkaae no da adi pefee sɛ, sɛ Onyankopɔn tua obiara ka sɛdeɛ ne nnwuma teɛ wɔ deɛ ɔyɛɛ wɔ honam mu a, ɛnneɛ kasafua ‘Ɔsoro,’ a wɔasiesie sɛ Ahotefoɛɔ no ɛnni awieɛ fie no, ɛsɛ sɛ ɛboro ahemman baako so. Ne saa nti, … berɛ a na yɛrekyerɛ Ɔhoteɛfoɔ Yohane Asɛmpa no ase no, me ne Ɔpanin Rigdon nyaa saa anisoadehunu yi”.Berɛ a wɔde saa anisoadehunu yi maae no, na Nkɔmhyɛni no rekyerɛ Yohane 5:29 ase.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Hiram, Ohio, bɛyɛ Ɔbɛnem 1832. Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ, “Twerɛsɛm no nkyerɛaseɛ ntoto ho mu no, menyaa nkyerɛkyerɛmu a ɛdisoɔ yi ɛfa Ɔhoteɛfoɔ Yohane Adiyisɛm no ho”.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joesph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 1, 1832. Saa da no na Nkɔmhyɛni no ne akannifoɔ afoforɔ ahyia mu sɛ wɔredwennwen Asɔre nsɛm ho. Kane no saa adiyisɛm yi hyɛɛ Nkɔmhyɛni no, Sidney Rigdon, ne Newel K. Whitney sɛ wɔntu kwan nkɔ Missouri na wɔnhyehyɛ Asɔre dwadie ne ntintim anammɔntuo, berɛ a wɔreyɛ “adwumakuo” a ɛbɛhwɛ saa anammɔntuo yi so, a ɛbɛma wɔanya fotoɔ a wɔde bɛkyekyere Sion na ayɛ mfasoɔ ama ahiafoɔ. Adwumakuo, a wɔfrɛ no Nkabom Dwumakuo no, wɔyɛɛ no Oforisuo 1832 na wɔguu no 1834 (hwɛ ɔfã 82). Wɔguu no mmerɛ kakra akyire no, wɔnam Joseph Smith akwankyerɛ so de kasasin “ahiafoɔ adekorabea ho nsɛm” de sii “dwadie ne ntintim nhyehyɛeɛ” ananmu wɔ adiyisɛm no mu, na asɛmfua “nhyehyɛeɛ” bɛhyɛɛ asɛmfua “adwumakuo” ananmu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Ɔbɛnem 12, 1832.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Stephen Burnett, wɔ Hiram, Ohio, Ɔbɛnem 7, 1832.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Ɔbɛnem 15, 1832. Wɔfrɛ Frederick G. Williams sɛ ɔmmɛyɛ sɔfo panin ne fotufoɔ wɔ Asɔfodie Kɛseɛ Titenafoɔ no mu. Abakɔsɛm twerɛtohɔ no kyerɛ sɛ berɛ a wɔnyaa saa adiyisɛm yi wɔ Ɔbɛnem 1832 mu no, wɔfrɛɛ Jesse Gause sɛ fotufoɔ maa Joseph Smith wɔ Titenafoɔ no mu. Nanso, berɛ a wanntumi annkɔ so wɔ saa ɔfrɛ yi yɔbea a ɛnsesa mu no, wɔyii ɔfrɛ yi akyire yi firii ne so maa Frederick G. Williams. Ɛwɔ sɛ yɛhunu adiyisɛm yi (a ɛbaa Ɔbɛnem 1832) sɛ anammɔn a wɔtuuiɛ sɛ wɔrehyehyɛ Titenafoɔ a wɔdi kan no mmara kwan so, ɛnam sɛ adeɛ pɔtee a wɔyɛeɛ ne sɛ wɔhyɛɛ sɛ wɔn-nya ɔfotufoɔ dibea na wɔnkyerɛkyerɛ mu sɛ saa frɛ no di mũ. Onuabarima Gause somm mmerɛ kakra nanso wɔyii no adi firii Asɔre no mu Ɔpɛnimma 1832. Wɔhyɛɛ Onuabarima Williams sɔfoɔ maa no saa dibea pɔtee yi wɔ Ɔbɛnem 18, 1833.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Independence, Jackson County, Missouri, Oforisuo 26, 1832. Na saa berɛ yi yɛ asɔfoɔ mpaninfoɔ ne Asɔre mpaninfoɔ agyinatukuo nhyiamu. Wɔ saa agyinatuo no ase na wɔgyee Joseph Smith too mu sɛ Asɔfodie Kɛseɛ no Titenani, dibea a na wɔahyɛ no sɔfoɔ wɔ mu dada wɔ asɔfoɔ mpaninfoɔ, mpaninfoɔ, ne asɔremma nhyiamu ase wɔ Amherst, Ohio, Ɔpɛpɔn 25, 1832 (hwɛ Ɔfã 75 atifiasɛm). Saa adiyisɛm yi si akwankyerɛ a wɔde maae wɔ kane adiyisɛm bi mu so dua (hwɛ ɔfã 78) sɛ wɔnsi adwumakuo bi—a wɔfrɛ no Nkabom Adwumakuo (wɔ Joseph Smith akwankyerɛ so, akyire yi wɔde asɛmfua “nhyehyɛeɛ” bɛsii “dwumakuo” ananmu)—sɛ ɛnhwɛ Asɔre no dwadie ne ntintim nnwumadie so.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Independence, Missouri, Ɔforisuo 30, 1832.Wɔnyaa saa adiyisɛm yi berɛ a na Nkɔmhyɛni no ne ne nuanom retu agyina.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɛbɔ 22 ne 23, 1832. Wɔ Ɛbɔ bosome mu no, na mpaninfoɔ no bi ahyɛaseɛ refiri wɔn asɛmpatrɛ dwuma ho wɔ apueɛ aman so reba, a na wɔrebɔ wɔn nnwuma ho amanneɛ. Berɛ a na wɔahyia mu wɔ saa anigyeɛ berɛ yi mu na wɔnyaa saa nkitahodie a ɛdi soɔ yi. Nkɔmhyɛni no frɛɛ yei sɛ adiyisɛm a ɛfa asɔfodie no ho.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Obubuo 27, 1832. Saa fã yi yɛ nyi-firi-mu-nsɛm a ɛfiri Nkɔmhyɛni no nwoma a wɔtwerɛ kɔmaa William W. Phelps, a na ɔte Independence, Missouri. Yei yɛ mmuae a ɛfa Ahoteɛfoɔ no ho, wɔn a na wɔatu akɔ Sion nanso na wɔnnii mmarasɛm a ɛkyerɛ sɛ wɔmfa wɔn agyapadeɛ mmɔ afɔreɛ na ɛnam saa nti wɔnnyaa wɔn apɛgyadeɛ sɛdeɛ Asɔre no nhyehyɛeɛ teɛ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔpɛnimma 6, 1832. Wɔnyaa saa adiyisɛm yi berɛ a na Nkɔmhyɛni no rehwehwɛ na ɔretenetene Twerɛ Kronkron no nsa ano atwerɛ nkyerɛaseɛ nwoma no.
Ɔko ho adiyisɛm ne nkɔmhyɛ, a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ anaa baabi a ɛbɛn Kirtland, Ohio, Ɔpɛnimma 25, 1832. Saa berɛ yi na akyinnyeɛ rekɔso wɔ Amerika Man mu ɛfa nnɔnkɔ ho ne twa a South Carolina atwa ɔman no toɔ no mu. Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ “ɔhaw a ɛfiri baae wɔ aman mu” no “bɛdaa adi pa ara maa Nkɔmhyɛni no “kyɛnn sɛdeɛ na ɛteɛ kane no, firi berɛ a Asɔre no hyɛɛ n’akwantuo ase wɔ ɛserɛ so no.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so wɔ Kirtland, Ohio, Ɔpɛnimma 27 ne 28, 1832 ne Ɔpɛpɔn 3, 1833. Nkɔmhyɛni no too yei din sɛ “ngodua ahahan … a wɔate afiri Paradise Dua so, Awurade asomdwoeɛ nkra a ɔde ma yɛn”. Wɔde saa adiyisɛm yi maae akyire yi a asɔfoɔ mpanimfoɔ a wɔn wɔ nhyiamu bi ase bɔɔ mpaeɛ “ ankorɛankorɛ de wɔn nne kyerɛɛ Awurade sɛ ɔnna ne pɛ adi nkyerɛ yɛn ɛfa Sion nkyekyereɛ ho.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland Ohio, Ogyefuo 27, 1833. Ɛnam sɛ na anuanom a wɔdi kan no nom tawa wɔ wɔn nhyiamu ase nti, Honhom no maa Nkɔmhyɛni no dwennwenee asɛm no ho; ɛno nti, ɔbisaa Awurade faa yei ho. Saa adiyisɛm, a wɔnim no sɛ Nyansasɛm no, yɛ ne nsunsuansoɔ.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith, a wɔde maae wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 8, 1833. Saa adiyisɛm yi yɛ anammɔn foforɔ ntoasoɔ a wɔtuuiɛ ɛfa Titenafoɔ a Wɔdi kan no nhyehyɛeɛ ho (hwɛ ɔfã 81 atifiasɛm no); ne saa nti, wɔhyɛɛ afotufoɔ a wɔabɔ wɔn din no asɔfoɔ wɔ Ɔbɛnem 18, 1833.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland Ohio, Ɔbɛnem 9, 1833. Saa berɛ yi na Nkɔmhyɛni no de ne ho ahyɛ Apam Dada no nkyerɛaseɛ mu. Berɛ a ɔduruu saa ɔfa no a ɛyɛ tete twerɛtohɔsɛm a wɔfrɛ no Apokrifa so no, ɔbisaa Awurade na ɔnyaa saa akwankyerɛ yi.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔbɛnem 15, 1833. Saa adiyisɛm yi kyerɛkyerɛ Frederick G. Williams, a na ɛnkyɛreeɛ wɔayi no sɛ fotufoɔ ama Joseph Smith, wɔ n’asɛdeɛ mu wɔ Nkabom Dwumakuo no mu (hwɛ afã 78 ne 82 atifiasɛm).
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Kɔtɔnimma 6, 1833.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, Ohio, Ɔsannaa, 1833. Wɔyii Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, ne Jared Carter sɛ Asɔre noadansie apamfoɔ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 1, 1833. Saa adiyisɛm yi yɛ akwankyerɛ kronkron ntoasoɔ ɛfa dan a wɔbɛsi ayɛ ɔsom ne nkyerɛkyerɛ wɔ mu, ne Awurade fie no (hwɛ ɔfã 88:119–136).
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, a ɛrekyerɛ Sion pɛɛwa anaa ahenkuro no nhyehyɛeɛ wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwohomumɔ 4, 1833, sɛ nhwɛsoɔ de ma Ahoteɛfoɔ no a wɔn wɔ Kirtland. Na saa berɛ yi yɛ asɔfoɔ mpaninfoɔ no nhyiamu, na asɛntitire a wɔdwennwenee ho no yɛ tɔn a wɔbɛtɔn nsase bi, a na wɔfrɛ no French afuo, a na ɛyɛ asɔre no a ɛbɛn Kirtland no dea. Esiane sɛ nhyiamu no anntumi ammpene so ɛfa deɛ ɔbɛhwɛ afuo no so nti, wɔn nyina ara gye too mu sɛ wɔbɛbisa Awurade afa asɛm no ho.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔsannaa 2, 1833. Saa adiyisɛm yi ka nkanka Ahoteɛfoɔ a wɔn wɔ Sion, Jackson County, Missouri ho asɛm, a ɛyɛ Awurade mmuaeɛ ma Nkɔmhyɛni no adebisa fa amannebɔ bi ho. Saa berɛ yi na asɔremma a wɔn wɔ Missouri Asɔre no mu refa ɔtaaeɛ a ɛmu yɛ den mu, na Kitawonsa 23, 1833 no, wɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔmfa wɔn nsa nhyɛ pene krataa ase sɛ wɔbɛfiri Jackson County.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔsannaa 6, 1833. Saa adiyisɛm yi baae ɛnam ɔtaa a wɔde taataa Ahoteɛfoɔ a na wɔn wɔ Missouri no nti. Missouri Asɔremma atubrafoɔ atenae a ɛredɔɔso no haa atubrafoɔ afoforɔ binom, wɔtee nka faa ahoteɛfoɔ no dodoɔ, wɔn amanyɔsɛm ne wɔn sikasɛm nkɛntɛnsoɔ, ne wɔn amammerɛ ne wɔn nyamesom nsonsonoeɛ ho no, ɛbɔɔ wɔn hu. Wɔ Kitawonsa 1833 no, akakabensɛmfoɔ bi sɛee Asɔre agyapadeɛ, de kooltar ne ntakra yeyɛɛ asɔremma mmienu ho, na wɔhyɛɛ Ahoteɛfoɔ no sɛ wɔmfiri Jackson County. Ɛwom sɛ akyinnye biara nni ho sɛ na Nkɔmhyɛni no ate Missouri nsɛmdenden no bi wɔ Kirtland (bɛyɛ kwansini ahankron de firi hɔ) deɛ, nanso na ɛnam adiyisɛm pɛ so na ɔbɛtumi ahunu sɛdeɛ tebea no yɛ den fa saa berɛ yi mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa John Murdock, Ɔsannaa 9, 1832, wɔ Hiram, Ohio. Na John Murdock reka asɛmpa no bɛboro afe baako berɛ a ne mma—a wɔnni maame wɔ ne yere, Julia Clapp, no wuo akyi, wɔ Oforisuo 1831—ne mmusua foforɔ te wɔ Ohio.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Sidney Rigdon, wɔ Perrysburg, New York, Ahinime 12, 1833. Ɛnam sɛ anuanom baanu yi afiri wɔn mmusua nkyɛn nna pii nti, wɔnyaa atenka bi maa wɔn.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Kirtland Ohio, Ɔpɛnimma 16 ne 17, 1833. Saa berɛ yi, na Ahoteɛfoɔ no a wɔaboa wɔn ho ano wɔ Missouri no rehunu amane wɔ ɔtaaeɛ ho. Na akakabensɛmfoɔ apamo wɔn afiri wɔn afie wɔ Jackson County; na na Ahoteɛfoɔ no abɔ mmɔden sɛ wɔbɛbɔ wɔn ho atenaseɛ wɔ Van Buren, Lafayette, ne Ray Counties, nanso ɔtaaeɛ dii wɔn akyi. Na ahoteɛfoɔ dɔm no ankasa wɔ Clay County, Missouri, saa berɛ no. Owuo ho ahunahuna a wɔde yii ankorɛankorɛ a wɔn wɔ Asɔre no mu hu no dɔɔso. Na Ahoteɛfoɔ a wɔn wɔ Jackson County ahwere efie nkonnwa, aduradeɛ, nyɛn-mmoa, ne ankorɛankorɛ agyapadeɛ afoforɔ; na wɔsɛɛe wɔn nnɔbaeɛ bebree.
Nsɛm a wɔtwerɛeɛ faa Asɔre no agyinatukuo kɛseɛ a ɛdi kan no nhyehyɛeɛ ho, wɔ Kirtland, Ohio, Ogyefuo 17 1834. Mpanimfoɔ Oliver Cowdery ne Orson Hyde na wɔtwerɛɛ anodisɛm a ɛdii kan ankasa no. Nkɔmhyɛni no hwehwɛɛ anodisɛm no mu da a ɛtoa so no, na da a ɛdihɔ no agyinatukuo kɛseɛ no de anokorɔ gyee anodisɛm a wɔasiesie no too mu sɛ Asɔre no “agyinatukuo kɛseɛ no dwumadie-mmarasu.” Wɔ 1835 mu no wɔnam Joseph Smith akwankyerɛ so de nkyekyɛmu 30 de rekɔ 32, a ɛfa Asomafoɔ Dumienu Agyinatukuo ho no kaa ho berɛ a wɔyɛɛ saa ɔfã yi krado sɛ wɔntintim nka Nkyerɛkyerɛ ne Apam no ho no.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ogyefuo 24, 1834). Wɔde saa adiyisɛm yi maae akyire yi a Parley P. Pratt ne Lyman Wight bɛduruu Kirtland, Ohio, wɔn a na wɔafiri Missouri aba ne Nkɔmhyɛni rebɛfa afotuo sɛdeɛ Ahoteɛfoɔ no bɛnya ahotɔ na wɔasan de wɔn akɔ wɔn nsase so bio wɔ Jackson County.
Adiyisɛm a wɔde maa Nkɔmhyɛni Joseph Smith, wɔ anaa faako a ɛbɛn Kirtland, Ohio, Oforisuo 1834, ɛfa Nkabom Kuo no ho (hwɛ afã 78 ne 82 atifiasɛm). Ɛrekame ayɛ sɛ na saa berɛ yi yɛ Nkabom Kuo no agyinatukuo nhyiamu, a wɔdii nkɔmmɔ faa Asɔre no honam fam nneɛma a ɛhia pa ara ho. Kane nhyiamu a kuo no yɛɛ wɔ Oforisuo 10 no sii gyinaeɛ sɛ wɔbɛgu kuo no. Saa adiyisɛm yi hyɛɛ sɛ mmom wɔnsan nhyehyɛ kuo no bio; ɛwɔ sɛ wɔkyɛ ɛmu agyapadeɛ ma kuo mma no sɛ wɔn sohwɛ-adwuma. Akyire yi, wɔnam Joseph Smith akwankyerɛ so sesaa kasasin “Nkabom Kuo” yɛɛ no “Nhyehyɛeɛ Nkabom” wɔ adiyisɛm no mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Jospeh Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Fishing Asubɔten so, Missouri, Ayɛwohomumɔ 22, 1834. Wɔ Nkɔmhyɛni no akwankyerɛ so no, Ahoteɛfoɔ a wɔfiri Ohio ne mmea afoforɔ bɔɔ nsra kɔɔ Missouri wɔ mpasatuo a akyire yi wɔbɛfrɛɛ no Sion Nsraban. Na wɔn botaeɛ ne sɛ wɔbɛkɔ akɔgya Missouri Ahoteɛfoɔ a wɔapamo wɔn no ma wɔasan akɔ wɔn nsase so wɔ Jackson County. Missourifoɔ a na wɔadi kan ataataa Ahoteɛfoɔ no surooe sɛ Sion Nsraban no bɛtɔ wɔn so werɛ ma wɔkɔto hyɛɛ Ahoteɛfoɔ no a wɔte Clay County, Missouri no bi so de dwodwoo wɔn ano. Akyire yi a Missouri ammrado twee ne bɔhyɛ sɛ ɔbɛboa Ahoteɛfoɔ saneeɛ no, na Joseph nyaa saa adiyisɛm yi.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Obubuo 25 1834. Wɔde saa adiyisɛm yi maa Warren A. Cowdery, a ɔyɛ Oliver Cowdery nuabarima panin.
Adiyisɛm a ɛfa asɔfodie no ho, a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, bɛyɛ Ɔbɛnem, 1835. Ɛwɔ mu sɛ wɔtwerɛɛ saa ɔfã yi wɔ 1835 deɛ, nanso abakɔsɛm nwoma si so dua sɛ nkyekyɛmu 60 de kɔsi 100 mu dodoɔ no ara yɛ adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith so wɔ Obubuo 11, 1831. Saa ɔfã yi ne Asomafoɔ Dumienu Kuo no nhyehyɛeɛ wɔ Ɔgyefuo ne Ɔbɛnem 1835 no wɔ twaka. Ɛrekame ayɛ sɛ Nkɔmhyɛni no de wei maae wɔ wɔn a wɔresiesie wɔn ho akɔ wɔn asɛmpatrɛkuo a ɛdi kan no anim wɔ Kɔtɔnima 3, 1835.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔpɛnimma 26, 1835. Wɔnyaa saa adiyisɛm yi ɛnam Lyman Sherman adesrɛ so, ɔno a wɔahyɛ no sɔfoɔ sɛ aduɔsonni dada na ɔde adesrɛ aba Nkɔmhyɛni no hɔ repɛ adiyisɛm ama wahunu n’asɛdeɛ.
Mpaebɔ a wɔbɔɔe berɛ a wɔtee tɛmpol a ɛwɔ Kirtland, Ohio, ho no, Ɔbɛnem 27, 1836. Sɛdeɛ nsɛm a Nkɔmhyɛni no twerɛɛe no kyerɛ no, wɔde saa mpaebɔ yi maa no nam adiyie so.
Anisoadehunu a wɔdaa n’adi kyerɛɛ Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne Oliver Cowdery wɔ tɛmpol no mu wɔ Kirtland, Ohio, Oforisuo 3, 1836. Na saa berɛ yi yɛ Homeda nhyiamu ase. Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ: “Awiaberɛ no, meboaa Titenafoɔ afoforɔ no ma wɔkyekyɛɛ Adidi Kronkron no maa Asɔre no, berɛ a yɛnya firii Dumienu no hɔ wieɛ no, wɔn a na ɛyɛ wɔn akwanya sɛ wɔdi dwuma wɔ twerɛpono kronkron no ho saa da yi. Meyɛɛ saa som yi maa me nuanom no wieɛ no, mekɔɔ ɔsɛnkafoɔ adwa no ho, na wɔasiane nkataanim no mu, na me ne Oliver Cowdery kotooe wɔ obuo ne kommyɛ mpaebɔ mu. Yɛsɔre firii mpaebɔ mu no, wɔbuee saa anisoadehunu a ɛtoa so yi maa yɛn baanu.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so wɔ Salem, Massachussetts, Ɔsannaa 6, 1836. Saa berɛ yi na ɛka kɛseɛ da Asɔre no akannifoɔ no so ɛnam wɔn nnwuma wɔ ɔsom adwuma no mu nti. Wɔtee sɛ sika dɔsɔɔ wɔ hɔ ma wɔn wɔ Salem nti no, Nkɔmhyɛni no, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, ne Oliver Cowdery tuu kwan firii Kirtland kɔɔ Ohio, sɛ wɔrekɔhwehwɛ saa asɛm yi mu, na wɔaka asɛmpa no nso. Anuanom no dii Asɔre no nnwuma ahodoɔ pii na wɔkaa asɛmpa no bi. Berɛ a ɛbɛdaa adi sɛ sika biara nni hɔ ma wɔn no, wɔsan kɔɔ Kirtland. Nneɛma titiriw a ɛwɔ saa abakɔsɛm yi mu no da adi wɔ saa adiyisɛm yi nsɛm mu.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so de maa Thomas B. Marsh, wɔ Kirtland, Ohio Kitawonsa 23, 1837, ɛfa Adwammaa no Asomafoɔ Dumienu no ho. Wɔnyaa saa adiyisɛm yi wɔ da a Mpanimfoɔ Heber C. Kimball ne Orson Hyde dii kan kaa asɛmpa no wɔ Enyirensi. Saa berɛ no na Thomas B. Marsh yɛ Asomafoɔ Dumienu Kuo no Titenani.
Nsɛmmisa bi ho mmuaeɛ ɛfa Yesaia ntwerɛeɛ no ho, a Joseph Smith Nkɔmhyɛfoɔ no de maae ɛwɔ anaa ɛbɛn Far West, Missouri, Ɔbɛnem 1838.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Far West, Missouri, Oforisuo 17, 1838.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Far West, Missouri, Oforisuo 26, 1838, a ɛda Onyankopɔn pɛ ɛfa saa bea no nkyekyereɛ ne Awurade dan no sie ho. Wɔde saa adiyisɛm yi ma Asɔre no asomfoɔ a wɔte adwa mu ne asafomma.
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, bea a ɛbɛn Wight’s Ferry, wɔ bea a wɔfrɛ no Daviess County, Missouri, Kɔtɔnimma 19, 1838.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Far West, Missouri, Kitawonsa 8, 1838, ɛfa Williams Marks, Newel K. Whitney, ne Oliver Granger mprenpren asɛdeɛ ho.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Far West, Missouri, Kitawonsa 8, 1838, sɛ saa nkotosrɛ yi ho mmuaeɛ: “Kyerɛ yɛn wo pɛ, O Awurade, fa Dumienu no ho.”
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Far West, Missouri, Kitawonsa 8, 1838, sɛ mmuaeɛ maa ne nkotosrɛ yi: “O Awurade! Kyerɛ wo nkoa deɛ worehwehwɛ afiri wo nkorɔfoɔ hɔ sɛ wɔn agyapadeɛ ho ntotosoɔ du du”. Ntotosoɔ du du mmara no, sɛdeɛ wɔte aseɛ nnɛ yi no, na wɔmmfa mmaa Asɔre no ansa na wɔrebɛma saa adiyisɛm yi. Na asɛmfua ntotosoɔ du du a ɛwɔ mpaebɔ a wɔaka ho asɛm yi wɔ adiyisɛm dada mu no (64:23; 85:3; 97:11) nnyina hɔ mma ɛdu mu nkyekyɛmu baako pɛ, mmom na ɛgyina hɔ ma ɛnnyɛ-nhyɛ afɔreɛ anaa ntoboa nyina ara a ɛkɔ Asɔre no fotoɔ mu. Na Awurade adi kan ama Asɔre no afɔrebɔ mmara ne agyapadeɛ sohwɛ mmara, deɛ asɔremma (titire mpaninfoɔ a wɔdi anim no) akɔ ho apam a ɛwɔ sɛ ɛyɛ afebɔɔ no. Ɛnam sɛ wɔn mu pii annhwɛ anni saa apam yi so nti, Awurade yi firii hɔ berɛ bi na ɔde ntotosoɔ du du mmara no maa Asɔre mu no nyina ara de hyɛɛ ananmu. Nkɔmhyɛni no bisaa Awurade wɔn agyapadeɛ dodoɔ a Ɔhia ma botaeɛ kronkron ahodoɔ no. Saa adiyisɛm yi ne ɛho mmuaeɛ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Far West, Missouri, Kitawonsa 8, 1838, a ɛda agyapadeɛ a wɔde atua ntotosoɔ du du a wɔabɔ din wɔ adiyisɛm a ɛdi kan no mu no adi, ɔfã 119.
Mpaeɛ ne nkɔmhyɛ a Joseph Smith Nkɔmhyɛni no twerɛeɛ wɔ krataa a ɔde kɔmaa Asɔre no berɛ a na ɔyɛ ɔdeduani wɔ Liberty afiase, Missouri no, wɔ Ɔbɛnem 20, 1839. Na nkɔmhyɛni no ne n’apamfoɔ pii ahyɛ afiase abosome bebree. Wɔn adesrɛ ne wɔn dwantoa a wɔde kɔɔ aban mu mpaninfoɔ ne atemmufoɔ hɔ no anntumi amma wɔn fahodie.
Awurade asɛm a ɛbaa Joseph Smith hɔ, berɛ a na ɔyɛ ɔdeduani wɔ Liberty afiase, Missouri, Ɔbɛnem 1839. Saa ɔfã yi yɛ nyi-firi-mu-nsɛm a ɛfiri krataa a wɔtwerɛ kɔmaa Asɔre no wɔ Ɔbɛnem 20, 1839 mu (hwɛ ɔfã 121 atifiasɛm).
Ahoteɛfoɔ no asɛdeɛ ɛfa wɔn a wɔtaataa wɔn no ho, sɛdeɛ Joseph Smith Nkɔmhyɛni no twerɛɛe, berɛ a na ɔyɛ ɔdeduani wɔ Liberty afiase no, wɔ Missouri. Saa ɔfã yi yɛ nyi-firi-mu-nsɛm a ɛfiri krataa a wɔtwerɛ kɔmaa Asɔre no wɔ Ɔbɛnem 20, 1839 mu (hwɛ ɔfã 121 atifiasɛm).
Adiyisɛm a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no, wɔ Nauvoo, Illinois, Ɔpɛpɔn 19, 1841. Esiane ɔtaae a ɛredɔɔso ne yɔbea a mmara mma ho kwan a ɔmanmufoɔ asomfoɔ de retia wɔn no nti, wɔhyɛɛ Ahoteɛfoɔ no maa wɔfirii Missouri. Okum ho nhyɛ a Lilburn W. Boggs, Missouri amrado de too dwa, wɔ Ahinime 27, 1841 no, amma wɔannya akwanya foforɔ biara. Wɔ 1841, mu berɛ a wɔde saa adiyisɛm yi maaeɛ no, na Ahoteɛfoɔ no akyekyere Nauvoo kuropɔn no wɔ baabi a na Commerce Illinois kane akuraa no wɔ no, na aha na wɔhyehyɛɛ Asɔre no asoɛeɛ.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Nauvoo, Illinois, Ɔbɛnem 1841, ɛfa Ahoteɛfoɔ a wɔn wɔ Iowa asase no so.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Brigham Young fie, wɔ Nauvoo, Illinois, Kitawonsa 9, 1841. Saa berɛ yi na Brigham Young yɛ Asomafoɔ Dumienu Kuo no Titenani.
Krataa a ɛfiri Joseph Smith Nkɔmhyɛni no hɔ de ma Nna a Ɛdi Akyire yi Ahoteɛfoɔ wɔ Nauvoo, Illinois, ɛfa akwankyerɛ wɔ awufo asubɔ ho, wɔtwerɛɛ wɔ Nauvoo, Ɛbɔ 1, 1842.
Krataa a ɛfiri Joseph Smith Nkɔmhyɛni no hɔ de ma Yesu Kristo Asɔre a Ɛwɔ hɔ ma Nna a Ɛdi Akyire Ahoteɛfoɔ, a ɛmaa wɔn akwankyerɛ bio faa awufoɔ asubɔ ho, wɔtwerɛɛ no wɔ Nauvoo, Illinois, Ɛbɔ 6, 1842.
Nkyerɛkyerɛ a Joseph Smith Nkɔmhyɛni no de maaeɛ, wɔ Nauvoo, Illinois, Ogyefuo, 9 1843, a ɔdaa nsafoa akɛseɛ mmiɛnsa adi a ɛnam so wɔbɛhunu abɔfoɔ asomfoɔ ne ahonhom su ankasa.
Nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a Joseph Smith Nkɔmhyɛni no de maae, wɔ Ramus, Illinois, Oforisuo 2, 1843.
Joseph Smith Nkɔmhyɛni no nkyerɛkyerɛ, a ɔde maaeɛ wɔ Ramus, Illinois, Kɔtɔnimma 16 ne 17, 1843.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Nauvoo, Illinois, wɔtwerɛɛe wɔ Kitawonsa 12, 1843, ɛfa daapem apam foforɔ no ho, ɛsan nso fa awareɛ apam a ɛyɛ daapem no ho ne mmaa dodoɔ awareɛ nyinasosɛm. Ɛwɔ mu sɛ wɔtwerɛɛ adiyisɛm yi wɔ 1843 mu deɛ, nanso adanseɛ kyerɛ sɛ na Nkɔmhyɛni no nim nyinasosɛm a ɛka saa adiyisɛm yi ho no bi wɔ 1831 dada. Hwɛ Asɔre no Dawurubɔ 1.
Adiyisɛm a wɔde maae nam Joseph Smith Nkɔmhyɛni no so, wɔ Hiram, Ohio, Obubuo 3, 1831. Ɔretwerɛ saa adiyisɛm yi nnianim no, Joseph Smith abakɔsɛm kyerɛ sɛ, “Saa berɛ yi na nneɛma pii wɔ hɔ a Mpanin no pɛɛ sɛ wɔhunu ɛfa sɛ wɔka asɛmpa no kyerɛ asase sotefoɔ, ne anoboaboa no ho; na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde nokorɛ hann no bɛnante, na wɔanya akwankyerɛ afiri soro no nti, Obubuo 3, 1831 no, mebisaa Awurade na menyaa adiyisɛm a ɛho hia a ɛtoa so yi.” Ɛdi kan no, wɔde saa ɔfã yi kaa Nkyerɛkyerɛ ne Apam nwoma no ho sɛ mmataho na akyire yi wɔmaa no ɔfã ntɔsoɔ.
Gyedie ho mpaemuka a ɛfa amammuo ne mmara nyina ara ho, a wɔnam adwen korɔ so gye too mu wɔ Asɔre no amansan nhyiamu a wɔyɛɛe wɔ Kirtland, Ohio, Ɔsannaa 17, 1835. Ahoteɛfoɔ bebree bɛhyiaa mu sɛ wɔrebɛdwennwen Nkyerɛkyerɛ ne Apam no mu nsɛm a wɔasusu sɛ ɛbɛyɛ ntintim a ɛdi kan no ho. Saa berɛ yi na wɔmaa mpaemuka yi nnianim a ɛdi soɔ yi: “Sɛdeɛ wɔmma nkyerɛaseɛ foforɔ bi mmfa yɛn gyedie a ɛfa asase amammuo ne mmara nyina ara ho anaa wɔnnya ɛho nteaseɛ a ɛnnyɛ nokorɛ nti, yɛadwene ho ahunu sɛ ɛfata sɛ yɛde yɛn adwenkyerɛ to dwa wɔ saa nwoma yi awieɛ.”
Wɔde Joseph Smith Nkɔmhyɛni no ne ne nua, Hyrum Smith Agyapanin no mogyadansedie wɔ Carthage, Illinois, Ayɛwohomumɔ, 27 1844 no to dwa.Wɔde saa nwoma yi kaa 1844 awieɛ mu Nkyerɛkyerɛ ne Apam no ho, deɛ na ɛreyɛ ayɛ krado ma wɔatintim aba dwa so berɛ a wɔdii Joseph ne Hyrum Smith awuo no.
Awurade asɛm ne ne pɛ a Ɔnam Nkɔmhyɛni Brigham Young so de maae wɔ Winter Quarters, Israel nsraban mu, Omaha Man mu, wɔ Missouri Asubɔnten atɔeɛ fam nsunoa, a ɛbɛn Council Bluffs, Iowa.
Anisoadehunu a wɔde maa Joseph Smith Nkɔmhyɛni no wɔ Kirtland Tɛmpol mu, Ohio, Ɔpɛpɔn 21, 1836. Na saa berɛ yi yɛ ayɛyɛdeɛ ho dwumadie a wɔde reyɛ krado ama tɛmpol no nteho.
Anisoadehunu a wɔde maa Titenani Joseph F. Smith wɔ Salt Lake Ahenkuro mu, Utah, wɔ Ɔpɛnimma 3, 1918. Wɔ ne kasa a ɛdi kan wɔ Asɔre no Afe-fã Amansan Nhyiamu mu, wɔ Ɔpɛnimma 4, 1918 no, Titenani Smith de too dwa sɛ wanya nkitahodie kronkron bebree abosome a abɛsene kɔ no mu. Ɛmu baako a Titenani no anya wɔ da a abɛsene no mu no, ɛfa Agyenkwa no nsrahwɛ wɔ awufoɔ ahonhom no nkyɛn berɛ a na Ne nipadua wɔ damena mu no. Wɔwiee nhyiamu no ara pɛ na wɔtwerɛɛe. Wɔ Ahinime 31, 1918 no, wɔde maa afotufoɔ a wɔn wɔ Titenafoɔ a Wɔdi Kan no mu, Agyinatufoɔ Dumienu no, ne Agyapanin no, na wɔde adwenkorɔ gye too mu.
Twerɛ Kronkron ne Mormon Nwoma no kyerɛ sɛ ɔyere-baako awareɛ yɛ Onyankopɔn awareɛ nhyehyɛeɛ a ɛdi mu gye sɛ Ɔka biribi foforɔ to dwa (hwɛ 2 Samuel 12:7–8 ne Yakob 2:27, 30). Ɛnam adiyisɛm bi a Joseph Smith nyaae nti wɔhyehyɛɛ mmaa dodoɔ awareɛ wɔ asɔremma no ntam wɔ 1840 ahyɛaseɛ (hwɛ ɔfã 132). Firi 1860 de rekɔ 1880 mu no, Amerika Man aban hyɛɛ mmara a ɛmaa saa nyamesom nneyɔeɛ yi yɛɛ mmaratoɔ. Akyire yi Amerika Asɛnnibea Kɛseɛ gye too mu. Ɔnyaa saa adiyisɛm yi, Titenani Wilford Woodruff de saa Nhyehyɛeɛ-Nwoma yi too dwa, na Asɔre no gye too mu sɛ ɛyɛ mmara a ɛwɔ sɛ wɔdi so wɔ Ahinime 6, 1890. Wei de mmaa dodoɔ awareɛ no baa awieɛ wɔ Asɔre no mu.
Mormon Nwoma no kyerɛ sɛ yɛn “nyina ara yɛ ade korɔ ma Onyankopɔn,” a “tuntum ne fitaa, akoa ne fahodieni, ɔbarima ne ɔbaa” nyinaa ka ho (2 Nifae 26:33). Wɔ Asɔre no abakɔsɛm nyinaa mu no, wɔabɔ nnipa a wɔfiri abusuakuo ne nipakuo biara mu wɔ aman pii mu asu na wɔatena ase sɛ asɔremma nokorɛfoɔ. Wɔ Joseph Smith nkwa nna mu no, wɔhyɛɛ asɔremma tuntum binom asɔfoɔ maa asɔfodie no. Wɔ Asɔre no abakɔsɛm ahyɛaseɛ no, Asɔre mpanimfoɔ gyaee sɛ wɔde asɔfodie no rema mmarima tuntum a wɔn ase firi Abibirem. Asɔre abakɔsɛm mma nteaseɛ fann mmfa saa nneyɔeɛ yi farebae ho. Na Asɔre no akannifoɔ gye di sɛ wɔhia adiyisɛm firi Onyankopɔn hɔ a ɛbɛma wɔasesa saa nneyɔeɛ yi na wɔde mpaebɔ hwehwɛɛ akwankyerɛ. Saa adiyisɛm yi baa Asɔre no Titenani Spencer W. Kimball hɔ na wɔsii so dua kyerɛɛ Asɔre akannifoɔ afoforɔ wɔ Salt Lake Tɛmpol mu wɔ Ayɛwohomumɔ 1, 1978. Saa adiyisɛm yi yii akwansideɛ biara firii hɔ a ɛfa bɔberɛ ho a kane na ɛfa asɔfodie ho no.